Kahor kulanka Chelsea iyo Man City, Marcos Alonso oo walaac ka muujiyay farqiga u dhexeeya labada kooxood – Gool FM
(Premier League) 07 Dis 2018. Laacibka reer Spain ee kooxda Chelsea Marcos Alonso ayaa xaqiijiyay in Blues ay sameesay qaladaad badan kulamadii ugu dambeeyay ay ciyaareen, isla markaana Manchester City ay sii joogteesay guulaheeda.
Marcos Alonso ayaa dhinaca kale tilmaamay in farqiga haatan u dhexeeya labada kooxood Manchester City iyo Chelsea uu yahay mid aad u weyn
Kooxaha Manchester City iyo Chelsea ayaa bari oo sabti ah ku wada balansan inay ku ciyaaraan kulan ka tirsan kulamada 16-aad ee horyaalka Premier League, kaasoo ka dhici doono garoonka Stamford Bridge, iyadoo laga war qabo in farqiga haatan labada kooxood u dhexeeya uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 10 dhibcood.
Marcos Alonso ayaa wareysi uu dhawaan ku bixiyay shabakada caanka ah ee “BBC” wuxuu kaga hadlay kulanka ay bari kula ciyaari doonaan kooxda Manchester City garoonkooda Stamford Bridge.
“Haddii aan guul darreysano wuxuu noqon doonaa farqiga inoo dhexeeyo ilaa iyo 13 dhibcood, sidaas darteed waa inaan ka fikirno inaan si wanaagsan ugu diyaar garoowno, inagoo aanan ku mashquulin farqiga dhanka kala sareynta”.
“Waa inaan u ciyaarnaa si wada jir ah iyo koox ahaan, waa inaan la tacaalnaa qaladaadkii aan sameynay kulamadii ugu dambeeyay, waxaana isku dayi doonaa inaan sameyno dadaalkeena ugu fiican si aan u wanaajino awoodeena ciyaareed inta ugu macquulsan”.
“Si kastaba ha ahaatee, waa xilli hore in laga hadlo tartanka horyaalka Premier League, haddii aan guuldareysano Sabtiga, farqiga inoo dhexeeyo anaga iyo hogaamiyaasha wuxuu noqon doonaa 13 dhibcood waana tiro aad u badan, laakiin waxaan heysanaa fursad fiican aan ku soo laaban karno”.
Paul Scholes oo kaga digay kooxda Manchester United inay sameeyaan saxiixa Zidane